‘UMPHAKATHI AWUZIQHELELANISE NEZINTO EZINGANDISA I-CORONAVIRUS’ – KAUNDA – Sivubela intuthuko Newspaper
IMeya yeTheku ngesikhathi ihambisana noMnu Sifiso Ngcobo iKhansela laku wadi 15 kubhekwa okusamele kulungiswe endaweni yase Tshelimnyama. Isithombe: Lethiwe Khuzwayo
By Makhosi Mngoma	 Last updated Mar 23, 2020
Imeya yeTheku uMnuz Mxolisi Kaunda ube yingxenye yomhlangano womphakathi waku Wadi 15 eTshelimnyama ngolwesihlanu ukukhuthaza umphakathi ukuba ungaphambani nemithetho ekhishwa uHulumeni mayelana neCoronavirus.
Lo mhlangano uba nyanga zonke kule ndawo usuke uhlelwe abesigungu se-Operation Sukuma Sakhe ngenhloso yokudingida izinkinga zomphakathi.
Badingide eyobhubhane legciwane iCOVID19 njenge nkinga yokuqala izwe lilonke elisabhekene nayo. “Uma kuthiwa kubantu ngezikhathi zantambama phakathi nezinsuku amashibhi awavalwe, akungashayi ihora lesithupha esavuliwe,” kusho uKaunda.
“Njengamanje uMasipala weTheku uvale imitapoyolwazi, amapaki, izindawo zokubhukuda, izindawo zokugcina amagugu nezokuzilolonga kulandela ukuvalwa kwezikole ngoba senzela ukuthi kungaqhubeki kubhebhetheke lesi sifo,” kubeka uKaunda “Uma abantu behlangana beqe esibalweni esingange-100 noma ubani obona lokho kumele abikele amaphoyisa ngoba usuphumile umbiko othi lokho akuvumelekile njengamanje,” kuqhuba uKaunda. Ube esechaza ukuthi abantu abenza okuphambene nalo mthetho bazoboshwa njengoba ebesekhulumile uNgqongqoshe wamaPhoyisa uBheki Cele.
Uphinde wahamba neKhansela lakuwadi 15 uMnuz Sifiso Ngcobo behlola indawo ukuthi yikuphi okusamele kwenziwe. IKhansela lakule ndawo libe selimutshengisa zonke lezi zindawo ezisadinga ukulungiswa kuzona abaqale ngokumtshengisa ibhuloho eliba yinkinga emphakathini ikakhulukazi uma lina izulu njengoba livele ligcwale amanzi kungadluleki, umgwaqo ongekho esimweni esihle, ihholo nokwakhiwa kwezindlu, izitamkoko ezizobalethela ukugula nobugebengu obukhona endaweni.
UKaunda ube esekhuluma namalunga akwaMasipala okuyiwona okumele aqinisekise ukuthi lezi zinkinga zomphakathi ziyalungiswa ngokushesha kwaba yibona abashoyo ukuthi bazozilungisa esikhathini esingeqile ezinyangeni eziyisithupha.